Wabiga Shabeelle oo fatahaad sameeyay | KEYDMEDIA ONLINE
Degaanno hoos taga degmada Jowhar ee Caasimadda Hirshabeelle ayaa waxaa habeenkii xalay aheyd ka dhacay fatahaad uu sameeyay Webiga Shabeelle.
JOWHAR, Soomaaliya - Wabiga Shabeelle ayaa fatahaado ka sameeyay degaano ay kamid yihiin Moyko iyo Baareey oo caasimadda Hirshabeelle ee Jowhar ka kala xiga dhinaca Koofur Bari iyo Waqooyi Bari halkaas oo degan yihiin qoysas badan.
Webiga Shabeelle ayaa sidoo kale sameeyay fatahaado hor leh, degaanka Baarey oo isna ay ku noolaayeen qoysas badan ayey ka barakaceen qoysas badan oo deganaa, kadib markii guryihii ay deganaayeen biyo galeen.
Fatahaadda Webiga Shabeelle uu ka sameeyay Moyko ayaa waxay sababeen in ay xiranto waddadii isku xiri jirtay Magaalada Jowhar iyo magaalada Muqdisho, waxaana sidoo kale uu saameeyay guryo iyo goobo Ganacs oo ku yaalla halkaas.
Inta badan wabiyada labada ah ee Soomaaliya mara ayaa sameeyay sanad kasta fahaado hor leh xilli roobaadka, mana jiro ilaa iyo hadda qorshe cad oo u muuqda mid wax looga qabanayo fatahaadaha wabiyada oo sanad kasta baabi'iya dalag iyo guryo sidoo kalena mararka qaar ay dad ku dhintaan fatahaadaha.